May 16, 2021 - Babal Khabar
May162021 by EditorNo Comments
पेट्रोल र डिजलको मूल्यवृद्धि,कति भयोत? पूरा हेर्नुहोस्।
२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमका अनुसार आइतबार राति १२ बजेपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य १२३ र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १०६ र आन्तरिक हवाइ इन्धनको आन्तरिक उडानाके मूल्य प्रतिलिटर ७८ कायम भएको छ । आयल निगमले एलपी ग्यास र अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडानको इन्धनको मूल्य भने बढाएको छैन ।
अतेन्तै खुशीको खबर: नेपालमा आज एकैदिन ६६४८ जना को’रोना सं’क्रमित डिस्चार्ज
नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा ६६४८ जना को’रोना संक्रमि’त डिस्चार्ज भएका छन् । योसहित निको हुनेको संख्या ३ लाख ३३ हजार १०८ जना पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा को’रोना सं’क्रमण भएर नि’को हुनेको दर ७४ . ६ प्रतिशत रहेको बताए । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप ७३६८ जनामा को’रोनाभाइ रस संक्र’मण पुष्टि भएको छ । पी’सीआर विधिबाट ७ हजार ३१६ र ए’न्टिजेन विधिबाट ५२ जना गरी जम्मा ७ हजार ३६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा २९२, ललितपुरमा ४३६ र काठमाडौंमा १ हजार ८८१ गरी जम्मा २ हजार ६०९ जनामा संक्र’मण पुष्टि भएको गौतमले जानकारी दिए । यस्तै आज संक्रम’णका कारण १४५ जनाको ज्या’न गएको पनि उनले जानकारी दिए ।त्यस्तै चलचित्र लेखक, निर्देश, गीतकार तथा संगीत
जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्रीले यस कारण पुनः शपथग्रहण गराउन पर्छ भनी माग
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुर्‍याएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले पुनः शपथग्रहण गराउन माग गरेको छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथग्रहण गराउन माग गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले 'त्यो पर्दैन' भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शब्द दोहोर्‍याउन अस्वीकार गरेका थिए । यस विषयमा यादवले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, '२०७८ वैशाख ३१ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहणमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा वाचन भएको सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा प्रतिज्ञा गर्दछु नभनी सत्यनिष्ठापूर्वक 'त्यो पर्दैन' भनेर ग्रहण गरेकाले यसले देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच
नेपललाई आपतकालीन सहयोग गर्न डब्लुएचओको अपिल
नेपालको स्वास्थ्य संरचनाले धान्न नसकेछि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपाललाई आपत्कालीन सहयोगको आवश्यक परेको बताएको छ । भारतसँगै नेपाल, श्रीलंका, भियनताम, कम्बोडिया र थाइल्यान्ड पनि चरम संकटमा परेको डब्लुएचओको निष्कर्ष छ । नियमित प्रेस सम्मेलनमा डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोसले भारतसँग नेपाललगायत देशमा संक्रमण र अस्पताल भर्ना ह्वात्तै बढेको बताएका छन् । यो समस्या सम्बन्धित देशको भन्दा ठूलो भएकाले डब्लुएचओको तर्फबाट सबैखाले सहयोग हुने उनले बताए ।
कोरोना महामारी रोक्न बली……
जाजरकोट । कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रण हुने विश्वासमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–८ हल्चौरमा देवीलाई बलि (बोका) चढाइएको छ । शनिबार दिउँसो गाउँलेहरु जम्मा भएर कालिका माई देवीलाई बलि दिइएको स्थानीयवासी हरिबहादुर खत्रीले बताए । नलगाडमा एक जनप्रतिनिधको मृत्यु भएसँगै छिमेकी रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा व्यापक मात्रामा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेपछि सो रोक्न बलि दिइएको खत्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसको औषधि बनेको छैन रे, हाम्रो गाउँमा समेत एक जनालाई कोरोना देखिसक्यो । बाँच्ने उपाय केही नभएपछि देवीको शरणमा पुगेका छौँ । यही जेठ १२ गते मष्टो देवतालाई बलि दिने गरी शनिबार बोकाको भाकल गरिएको छ । शनिबारदेखि रातभर खर्कराती गर्ने (गाउँभरिका मानिस जम्मा भएर देवताको मन्दिरमा जाग्राम बस्ने) योजनाका साथ गाउँलेहरु मन्दिरमा जम्मा भएको खत्रीले बताए । मष्टा देवता र कालिका माईबाहेक अरुले यो रोग नियन्त्रण
काठमाडौंमा आजदेखि काहा काहा चिनियाँ खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइँदैछ ।पूरा हेर्नुहोस्।
२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं जिल्लामा आइतबारदेखि चिनियाँ खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाइँदैछ । जेठ ११ गतेसम्म चल्ने खोप अभियानमा चैत २५ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म पहिलो डोज खोप लगाएकाहरू सहभागी हुन सक्ने वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको ३३ वटै वडामा खोप लगाइँदैछ । वडा भित्रको तोकिएको ठाउँमा कार्ड देखाएर खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा ३ ठाउँमा दोस्रो डोज चिनियाँ खोप लगाइँदैछ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका बाहिर कीर्तिपुर नगरपालिकामा नयाँबजार गेट र बुँगाउँमा रहेको राराहिल मेमोरियल स्कुलमा गरी २ ठाउँमा खोप केन्द्र तोकिएको छ । काठमाडौं बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको २ ठाउँ, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको २ ठाउँ, टोखामा २ ठाउँ र नागार्जुन नगरपालिकाको २ ठाउँमा जेठ ११
कोरोना कहर कहिले सकिन्छ ? बिज्ञहरु यसो भन्छन
छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर केही मत्थर हुन थालेसँगै नेपालमा पनि त्यस्तै हुने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । संक्रमण करिब एक सातासम्म यथावत् रहने वा बढ्ने, त्यसपछि केही समय स्थिर रहेर ओरालो झर्न थाल्ने उनीहरूको अनुमान छ । विज्ञहरूका अनुसार गत वर्ष भारतमा संक्रमण घटेको केही सातामै नेपालमा पनि घट्न थालेको थियो । ‘कोभिड–१९ को सन्दर्भमा भारत र नेपालको टाइमलाइनमा दुईदेखि चार सातासम्मको फरक देखिएको छ,’ काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सकी महामारीविद् डा. अर्चना श्रेष्ठले भनिन्, ‘भारतका विभिन्न ठाउँमा संक्रमण तल जाने क्रम सुरु भइसकेकाले नेपालमा पनि दुईदेखि चार सातामा घट्ने देखिन्छ ।’ उनले भारतमा यसै साता कोभिडको संक्रमण बिस्तारै कम हुनेतर्फ लागेको बताइन् । भारतमा संक्रमण विस्तार भएको केही सातामै हामीकहाँ पनि त्यस्तै भयो । दुई साताअघि भारतमा अक्सिजनको हाहाकार, अस
गर्मीको समयमा हामीलाई चिसो खानेकुरा खान मन लाग्छ । यस समयमा पिसाब पोल्ने, पेट पोल्ने, छाला सम्बन्धी समस्या तथा खाना अपच हुने, खाना नरुच्ने जस्ता समस्याका कारण गर्मीमा प्राय चिसो र साधारण खानेकुरा मन पर्छन् । यसकारण पनि हामीले खाजा तथा खानामा दहीलाई समावेश गर्नु निकै फाइदाजक छ । दुधको सट्टा दही खानु स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ । दुधमा पाइने ‘फ्याट’ शरिरलाई एक उमेरमा गएपछि हानी गर्छ । दहीमा पाइने फोस्फोरस र भिटामिन डी शरिरको लागि लाभकारी हुन्छ । दहीका अन्य फाइदाहरु यस्ता छन् बिहान सूर्योदयसँगै टाउको दुखाइ बढ्दै जाने समस्या छ भने सूर्योदयअघि दहीमा भात मुछेर खाने गरेमा टाउको दुखाइ कम हुन्छ ।खानासँगै दही पिउँदा खानेकुरा सजिलैसँग पच्छ, र अपचको समस्या कम हुन्छ । सरीरको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्ने तथा आँतको गर्मी हटाउने काममा पनि दही लाभदायक हुन्छ ।पेटमा बोसोको मात्रा निरन्तर बढ्दै गएको
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवादले फेरि नयाँ रुप लियो,अब के होला त?
काठमाण्डौ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवादले फेरि नयाँ रुप लिएको छ । ओली समूह जेठ २ २०७५ को अवस्थामा फर्कन नमानेपछि विवाद देखिएको हो । जेठ २ बाट टेकेर जाऔं भन्दा ओली फेरि नयाँ ढंगबाट जान कार्यदल बनाएर सुझाव लिएर बढ्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जेठ २ मा फर्कन नसकिने र २८ फागुनमा ओलीले लिएको निर्णय पनि फिर्ता हुन नसक्ने बताइसकेका छन् । यसअघि ओली जेठ २ मा टेकेर जानेबारे सकारात्मक बनेका थिए । तर, धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली फेरि माधव नेपाल समूहलाई पेलेरै जाने रणनीतिमा पुगेको देखिदैछ । ओलीले माधव नेपालसहित ४ नेतामाथिको कारबाही मात्र फुकुवा गरेका छन् । एमालेको नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित पदाधिकारीलाई यथावत् राख्न मानेका छैनन् । पदाधिकारीमा ओलीको भन्दा नेपाल समूहको बहुमत छ । त्यसैले उनी त
बादलले माधब नेपाललाई एमालेमा स्वागत छ भनेपछी नेपालले दिए यस्तो जबाफ
काठमाडौं – एमाले पार्टीको विवाद समाधानका लागि आयोजना गरिएको बैठक सहमती नजिक पुगेको छ । सिंहरदबारमा सकिएको छलफलमा नेताहरु हंसमुख लिएर बाहिरिएका छन् । खासगरी माधव नेपाल समुहले २०७५ जेठ २ भन्दा अघिको स्थितीमा पार्टीलाई फर्काउनु पर्छ भने पनि त्यसमा अडिरहने कुरालाई गौण बनाउंदै गएको छ । किनकि माधव नेपाल समुहसँगको वार्तामा संस्थापनका तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । वार्तामा सहभागी एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार बादललाई वार्ता टोलीमा देखेपछि माधव नेपालले भन्नुभयो ‘ बादल कमरेड एमालेमा स्वागत छ । ’ बादल २०७७ फागुन २८ को निर्णयबाट स्थायी कमिटी सदस्य र बाग्मती प्रदेशको इन्चार्ज चयन हुनुभएको हो । ‘बादलको उपस्थितीमा भएको वार्तामा उहाँहरु सहभागी भएकोले फागुन २८ पछाडीका बिषयमा सहमती खोजिदैछ भन्ने बुझ्नुहोस’ वार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो । माधव नेपाल पक्षले आफूले सुरु द